Ihholo elikhulu okungathiwa liyinhloko ye-Aprico.Zingama-1477 izihlalo ezisabalele esikhaleni esikhulu esizungezwe ukufudumala kwezinkuni.
Ungakuzwa ukuzibophezela kumsindo ogcwele yonke indawo, kufaka phakathi isikhombisi se-acoustic esihambayo esihambisa umsindo womsindo obukhoma ezihlalweni zabalaleli.
Phambili kwesiteji: Ikhethini lesiteji "Ingoma kaShinki" nguRyuko Kawabata
Isiteji esivela ezilalelini: Nebhodi yomsindo iphumile
Izihlalo sezilaleli sezizonke: Kusuka ohlangothini lwesiteji
(Isebenzisa i-proscenium ehambayo)
Umkhono omuhle 10m
Umkhono ongezansi 12m Ukuhamba okukhombisa i-acoustic
lahla ikhethini *
Ikhethini le-Opera *
Umgwaqo wezimbali wesikhashana
Isigaba sesikhashana se-Noh
* Ayikwazi ukusetshenziswa uma usebenzisa i-reflector.
Isifunda sokufiphalisa 3kw x 344 amasekethe esiteji
6kw x 12 amasekethe ezihlalo, 3kw x 4 amasekethe
Ikhonsoli yokukhanyisa (iPanasonic Pacolith Shoot) Hlela kabusha i-fader 120ch
Imemori yesigcawu esinezinyathelo ezi-3 2,000 esenziwe ngesandla
(Kumahhala lapho kusetshenziswa njengokukhanya komsebenzi, kepha kukhokhiswa lapho kusetshenziswa njengokukhanya kwesiteji) Imigqa emi-3
isibani sophahla Imigqa emi-2
Ukumiswa ukukhanya (ibhuloho uhlobo) Imigqa emi-4
Proscenium Khanyisa Imigqa emi-2
Ukukhanya kwamatomu 1 isethi
Upper Horizont Lower Horizont Light 1 irowu 1 irowu
Ukukhanya kwezinyawo Amayunithi ayi-8 x 5 imibala
Ukukhanya kohlangothi olungaphambili 60w 12 lights / 3 circuits 14
(Ingasetshenziswa uma usebenzisa i-octopus)
I-pin pin ebonakalayo
(Kudingeka opharetha ayisebenzise.) 2kw xenon x 4
Isihlanganisi seselula (YAMAHA CL-3) Put Ukufaka: Monaural 64ch
◇ Lokukhipha: Hlanganisa ibhasi 24
I-Stereo ibhasi 1ch
imakrofoni engenantambo I-800MHz (B frequency band) x 6ch
Idivayisi yemakrofoni elenga amaphuzu amathathu
Isikhulumi seProscenium (L / C / R)
Side ikholomu isikhulumi (L / R)
6 amatafula esiphikisayo
Amadeski ayi-12 amade
Amabhodi emininingwane ayi-3 (usayizi we-A4, usayizi we-B9, njll.)
Izikrini ezimbili kathathu
Imephu yendawo yokwamukela
chofoza lapha ukulanda
Izihlalo eziyishumi kulayini we-14, 2-11, zisusiwe ezihlalweni ezinamasondo.
Umhleli unesibopho sokufaka nokubuyisela izihlalo. (Kuthatha cishe imizuzu engama-4 ukuthi abantu abane basebenze.)
Lapho ufaka izipikha zesikhashana, ezinye izihlalo zezithameli zingase zingasebenziseki.
Sicela uqaphele lapho wenza isihlalo esibekelwe.
Ukungena ezihlalweni ezinkulu zabalaleli behholo ikakhulukazi kusuka esitezi sesibili.Sicela usethe ukwamukela esitezi sesi-XNUMX.
Kufakwe i-magnetic loop (*) ehholo elikhulu.
Ukuze usebenzise i-magnetic loop, uzodinga okokusebenza komsindo okunamathiselwe.
Uma ungumhleli ofuna ukuyisebenzisa, sicela ufake isicelo kusengaphambili.
* Uhlelo lokusekelwa lokuzwa ukuze ludlulise kahle izwi esiteji kumakhasimende
Ekuseni (9: 00-12: 00)
Ntambama (13: 00-17: 00)
Ebusuku (18: 00-22: 00)
Usuku lonke (9: 00-22: 00)
IHholo Elikhulu: Isiteji kuphela
Igumbi elikhethekile lokuqala lokugqoka
Igumbi lokugqoka lokuqala
Umdwebo wesiteji / wezethameli
Uhlelo olukhulu lwesiteji sehholo
Isigaba esiphambanweni sehholo elikhulu
Umdwebo omkhulu wababukeli basehholo
Mayelana negumbi lokugqoka, igumbi labasebenzi, njll.
Ngaphandle kwamakamelo okugqoka akhokhelwayo ayisishiyagalombili, ihholo elikhulu linegumbi labasebenzi, ihhovisi lezingubo zokugqoka, igumbi lokulungiselela abahleli, igumbi lokugeza labadlali, igumbi lokugqoka, igumbi lezingane lesikole sezingane, negumbi losizo lokuqala.
Ukuze uthole imininingwaneImininingwane esegumbini elikhulu lokugqoka ehholo Sicela ubone.
Igumbi lokugqoka lokuqala (isitezi sokuqala sangaphansi)
Igumbi lokugqoka lesi-1 (isitezi sokuqala sangaphansi)
IHholo elikhulu MAP
Ukuhlelwa kwesiteji / ukugqoka
Ihhovisi legumbi lokugqoka